Shirkada Dahabshiil oo Mucaawimo iyo Adeegyada Casriga Ah ee Shirkada Ugu Deeqday 3000 Qoys oo ku waxyeeloobay Fatahaada Wabiga | Ceerigaabo News
Shirkada Dahabshiil oo Mucaawimo iyo Adeegyada Casriga Ah ee Shirkada Ugu Deeqday 3000 Qoys oo ku waxyeeloobay Fatahaada Wabiga
Shirkada Dahabshiil ayaa sheegtay inay ku darsatay gurmadka fatahaada Mucaawimo kala duwan oo ay ugu talo gashay illaayo 3000 oo qoys, Maamulaha shirkadaasi Dahabshiil Cabdirashiid Siciid Ducaale ayaa isaga oo jooga Imaaraadka uga waramay Mawlid Xaaji Cabdi oo ka socday BBC da waxaana uu ka yidhi Mudane Cabdirashid dhacdadan;
Jawaab: Sidaad u sheegtay dhibaatooyin culusbaa ay keeneen fatahaadahaa dhacay , dad badan oo masaakiina ayaa waxii ay maal iyo xoolo lahaayeen ay khasaaro soo gaadheen, markaa anaga oo ka qayb qaadanayna dadka soomaaliyeed meel ay joogaanba haddii aanu dahabshiil nahay in aanu deeq gaadhsiino dadka dhibaataysan ee magaalada Baladweyne iyo agagaarka magaaladaba u kala qaxay ama kala degay.
Su’aal: Deeqdan aad ugu talogasheen inaad bixisaan Cabdirashiid maxay tahay, bal haddii aad nala wadaagto waxa ay leeg tahay waxa aad haysaan , Maxay tahay?
Jawaab: Mawlidow dadka illaa 3000 oo qoys dad gaadhaya ayaanu waxaanu ugu dhawaaqnay in aanu ka qayb qaadano oo aanu u qaybnino Raashin sida ; Bariis, Sonkor, Bur iyo Saliid. Dadkaasi oo kala degan Magaalada Baladweyne ama tuulooyinka Wabiga ku Xeeran ee galbeedka iyo Bariga Buurta Shandushe, Ceeljaale, dhamaan dadkaasi oo dadkii dhibaatooyinka soo gaadhsiiyeen biyahaas ama daadka ku fatahay. Waxaa kale oo aanu ku dhawaaqnaa oo aanu dadka somaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba gudo iyo dibedba inay dadkaa soo caawiyaan anaga oo u furnay Akawno lacagta ay ugu shubi karayaan, xaga xawaalada oo kale akown ayaanu u furnay oo qofkii dibeda ama gudaha joogaba anaga oo aan wax khidmad ah ka qaadanayn wixii uu awoodi karo uu ugu shubi karo. Akowndadaa waxaa kamid ah numberka :151515 iyo midka ah Edahab ama mobile paymentka ee Somtel, Edahab iyo Dahabshiil ay leeyihiin oo isna numberkiisu noqonaayo;0620151515. Waxaanu ugu talo galnay qof wal oo dadkan dhibaataysan caawin kara dalka gudihiisa iyo dibediisaba. Dadka maamulayaa waa shaqaalaha Dahabshiil iyo wakiiladii Dahabshiil iyo dadka odayaasha waxgaradka ah ee Gobolka degan si ay u hubiyaan in dadkii masaakiinta ahaa ee dhibaatadaasi soo gaadhay in deeqdan raashinka ah iyo ta lacageedba ay gaadho sida ugu dhakhsaha badan.
Suaal: kolay yaraysi male gargaar waa gargaar , waxaa jirta dhaliil la idiin jeedinaayo shirkadihiina ganacsiga ama ha ahaato Isgaadhsiin ama Xawaalad ama ganacsi kale oo aad ku jirtaane , macaashka aad heshaan ama faaidada aad ka heshaan dadka soomaaliyeed iyo waxa aad bixisaan waxaa la yidhaahdaa isma leeka, dhaliishaas oo kale sided u aragtaa?
Jawaab: Mawlidow garan maayo dhaliishaasi meeshay ka imanayso anagu haddii aanu nahay Dahabshiil shirkadaha oo dhan uma hadlo , anagu hadii aanu Dahabshiil nahay intii aanu shaqaynaynay mar abaaro dhaceen , mar daadad fataheen, mar cusbitaalo la samaynaayo iyo hadii dhulka wadooyin la dhisaayo mar walba shirkada Dahabshiil bilow iyo dhamaad ba hormood ayay ka tahay waana ta ugu horeysa ee samafalka ka qaybqaadata markaa cidii samafalka wax ka taraysa waanu ku dhiiri galinaynaa yar iyo weynba , ganacstada kalena waan ku dhiri galinaynaa cid walba in cidii tabaalaysan wax ka qabtaan.